Saturday, 10 March 2018 00:29
Injifannoo warqii dachaa atileetoota keenyaan
Finfinnee: Gosawwan Ispoortii Federeeshinii Atileetiksii Biyyooleessaa (“IAAF”)n qophaa'an keessaa tokko dorgommii atileetiksii mana keessatti. Dorgommiin kun akka adeemsifamuuf bu'uurri kan kaa'ame ALA bara 1985 baatii Guraandhalaa keessa ture.
Faransaayis baruma eerame kana shaampiyoonicha keessumeessiteetti. Dorgommichi naamusa gaariidhaan jalqabame xumuramusaafi koreen waldorgommiis muuxannoo argachuusaatti shaampiyoonichi akkuma kanneen biroo waggaa lamatti al tokko mana keessatti biyyoota adda addaatti akka gaggeeffamu murtaa'e.
Haaluma kanaan shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa kan mana keessaa ALA Bitooteessa 7fi 8 bara 1987 Ameerikaa, magaalaa Indaamaapaalitti adeemsifame.
Shaampiyoonichi erga jalqabamee waggoota 31 lakkofsiseera. Waggottan kanneen keessatti yeroo 17f biyyoota adda addaatti adeemsifameera. Baranas Guraandhala 22 hanga 26 bara 2010tti Ingiliz, Barmingihaamitti adeemsifameera.
Dorgommiiwwan hanga ammaatti adeemsifamanitti biyyoota miseensoota federeeshinii atileetiksii biyyooleessaa 215 keessaa gabate meedaaliyaa keessa kan galan biyyoota 84 qofa.
Biyyoonni gabatee meedaaliyaa keessa galan kunneen meedaaliyaa warqii 471, meetii 478, nahaasa 482 walumaa galatti meedaaliyaawwan kuma tokkoofi 431 argataniiru.
Isaan keessaa ammoo Ameerikaan meedaaliyaawwan warqii 120, meetii 79, nahaasa 73 dimshaashumatti meedaaliyaawwan 272 argachuudhaan addunyaarraa tokkoffaadha.
Ruusiyaan warqii 52, meetii 48, nahaasa 45n walumaagalatti meedaaliyaa 145n lammaffaa, Itoophiyaan ammoo meedaaliyaa warqii 27, meetii 10, nahaasa 13 dimshaashumatti meedaaliyaawwan 50n addunyaarraa sadaffaa, Afrikaarraa ammoo sadarkaa tokkoffaarratti argamti.
Dorgommii barana guyyoota afuriif adeemsifameenis Ameerikaan meedaaliyaa warqii jaha, meetii kudhaniifi nahaasa laman waliigalatti meedaaliyaawwan 18n tokkoffaa taateetti.
Itoophiyaan ammoo meedaaliyaawwan warqii afuriifi meetii tokko dimshaashatti meedaaliyaawwan shaniin addunyaarraa lammaffaa Afrikaarraa tokkoffaa ta'uun xumurteetti.
Poolaandii meedaaliyaa shaniin sadaffaa, akkasumas morkattuun Itoophiyaa Keeniyaan meedaaliyaa nahaasa tokko qofaan sadarkaa 29ffaa argachuun ishee beekameera.
Itoophiyaan meedaaliyaawwan kanneen kan argatte fiigicha meetira kuma sadiifi kuma tokkoofi 500 dubartootaan Ganzabee Dibaabaatiin, dhiiraan ammoo fiigicha meetira kuma sadiin Yoomiif Qajeelchaafi kuma tokkoofi 500n ammoo Saamu'eel Tafarraatiin.
Meetiin kan argame ammoo fiigicha meetira kuma sadiin Salamoon Baargaatiin ta'uun beekameera.
Seenaa shaampiyoonaa atileetiksii mana keessaatti Atileet Ganzabee Dibaabaa shaampiyoonaawwan arfan ALA bara 2012 irraa kaase hanga 2018 adeemsifamanitti mo'achuudhaan meedaaliyaawwan warqii shan argatteetti.
Ganzabeen shaampiyoonaawwan adeemsifamanitti meedaaliyaa baay'ee argachuudhaan Itoophiyaa qofa osoo hinta'iin Afrikaarraas atileetii duraa ishee taasisa.
Jilli atileetikisii warqiiwwan dachaa argamsise kun Wiixata darbe biyyatti yoo deebi'u Ministirri Minsteera Dargaggoofi Ispoortii Obbo Iristuu Yirdaaw, Pirezdaantiin Koree Olompikii Biyyaaleessaa Doktor Ashabbir W/Giyoorgisiifi Pirezdaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Haayilee G/Sillaasee simannaa taasisaniiruuf.
Ganzabeen wayita biyyatti deebitu akka ibsiteetti, gammachuun kun kan ishee qofaa osoo hinta'iin kan ummata yeroo hundaa meedaaliyaa warqii mi'eeffateeti jetteetti. Akkasumas, qabxiin argame kan laphee nama dhiibsisu osoo hintaane gara fuula duraatti dorgommiiwwan isaan eeggatanif kan isaan qopheessu ta'uus dubbatteetti.
Saturday, 10 March 2018 00:27
Saturday, 10 March 2018 00:26
Saturday, 10 March 2018 00:23
Saturday, 10 March 2018 00:21
Qisaasama humna daa'immanii hambisuun gahee qaamolee maraati
Gochi daa'imman hojii humnaan olii irratti hirmaachisuu biyyoota guddachaa jiran keessatti yeroo ammaa dhimma yaaddessaa yemmuu ta'u, rakkoon kun Itoophiyaattis ni mul'ata.
Damee hojii daa'imman hedduminaan irratti hirmaachaa jiraniifi qisaasama humnaatiif isaan saaxilaa jiran keessaa hedduun hojiiwwan al idilee kanneen akka hojiiwwan mana keessaa, hojii warshaaleefi indaastiriiwwanii, misooma qonnaa gurguddaa, qotiinsa albuudaa, konistraakshiiniifi dhaabbilee tajaajila kennan keessatti raawwatamaniidha.
Qisaasama humnaa daa'imman irra gahaa jiru ittisuudhaaf sagantaan haaraa qophaa'aa jiraachuu Ministerri Dhimma Hojjataaafi Hawaasummaa ni ibsa.
Biyyattiitti daa'imman hojii humnaa isaaniitii oliirratti bobbaasuun bal'inaan ni mul'ata. Rakkoo gama kanaan jiru furuuf sagantaa haaraan qophaa'uusaa marii torban darbe qaamota dhimmi ilaalu waliin Finfinnetti adeemsifamerratti ibsameera.
Gochi qisaasama humna daa'immanii biyyattiitti bal'inaan kan mul'atu ta'uu kan himan ministerichatti Ogeessi Ogeessa Iddoo Hojii Obbo Masfin Yilmaa, dhuma bara 2016tti qisaasama humna daa'immanii guutumaatti biyyattii keessaa dhabamsiisuudhaaf sagantaa haaraan qophaa'uusaa dubbatu.
Akka ibsa ogeessichaatti, sagantaan haaraa kun hojii humnaan olii daa'immaniin raawwatamaa jiran ni hir'isa, daddabarsa daa'immanii biyya keessaafi gara biyya alaatti taasifamu kan dhaabuufi daa'imman mirga umrii daa'immummaasaaniitti barumsarratti akka dabarsaniif qaban ni kabajsiisa.
Sochii daa'imman biyyattii hojii humnaa olii irratti bobba'an kuma 13 ta'an rakkoo kana keessaa baasuuf taasifameen daa'imman kuma torba baraaruun danda'ameera. Kanaanis hojjechiiftotaafi maatii daa'immaniitiif hojiin hubannoo uumuu bal'inaan erga kennameen booda hawaasatti dabalamanii waan umriinsaanii isaaniif eyyamu qofarratti akka bobba'an taasifameera.
Daa'imman hundi hojiiwwan umriinsaanii isaaniif eyyamuun ala irratti kan hirmaatan yoo ta'e egereesaanii irratti dhiibbaa guddaa kan geessisu ta'uu kan himan immoo, dhaabbata 'World Vision'tti bakka bu'aa damee Itoophiyaa Obbo Saamu'el Sugaamooti. Daa'imman umurii daa'imummaasaanii hunda ol barumsarratti dabarsuu kan qaban ta'uu dubbatu.
Dhimmi daa'imman hojiiwwan humna isaaniitii olii irratti bobba'anii hojjechiisuu utuu yeroon itti hinkennamin karaa guutuu ta'een furamuu kan qabu ta'uu kan himan immoo hirmaataa waltajjichaa Obbo Bafiqaaduu Tasammaati. Akka isaan jedhanitti, mootummaan seerota mirga daa'immanii kabajsiisuuf bahan hojiitti hiikuu irratti cimee hojjachuu qaba. Sochii mootummaan mirga daa'immanii kabajsiisuuf taasisu akkuma jirutti ta'ee, hirmaannaan qaamota garaa garaas murteessaa ta'uu himu. Daa'imman gosoota hojii ulfaataa irratti hirmaachaa jiraniifi qisaasama humnaatiif saaxilaamaa jiran sa'aatii dheeraa kan hojjetan ta'us kanfaltiin isaanii garuu gadaanaadha. Haalli hojii irratti balaaf saaxilamuu isaaniis bal'aadha. Daa'imman kunneen carraa baruumsaas waan hin arganneef hiriyyootasaanii waliin dorgomuu hin danda'an. Kanaan wal qabatee keessumaa rakkoon shamarranirra gahu dachaa yemmuu ta'u, hojjechiiftotaafi qaamota garaa garaatiin gudeeddamuudhaafis carraan jiru bal'aadha.
Walumaagalatti, guddinaafi jijjiirama biyyattii keessatti mul'achaa jiran itti fufsiisuun kan danda'amu, daa'imman abdii abdii biyyattii borii ta'an eeganiifi kunuunsanii guddisuun kan danda'amu yoo ta'eedha. Kanaafuu hojiin mirga daa'immanii eeguufi eegsisuu akkasumas faayidaa isaanii kabjchiisuu gahee qaamota hundaa ta'uu qaba.
Saturday, 10 March 2018 00:19
Iccitiin guddina biyyoota dureeyyii duuba jiru Itoophiyaaf fakkeenya hin ta’uu laata?
Addunyaa tokkittii dhalli namaafi uumamamni gara garaa irra jiraatu kana keessa walcaalmaafi garaagarummaan jiru guddaa waan ta’eef wayita yaadaan xiinxalamu garaagarummaan kun maal irraa madde gaaffii jedhu nama keessatti uumuunsaa hin oolu.
Garaagarummaan kun biyyoota gidduutti qofa osoo hintaane namoota naannawaa tokko jiraatan gidduuttillee waan m ul'atuuf uumaan walcaalchisee waan arjoome namatti fakkaachuunsaa hin oolu.
Kaan sooressa, kaan hiyyeessa waanyaatee bulu hinqabne, kaan teeknooloojii ammayyaa daran fagaatetti fayyadamuun addunyaa haaraa keessa kan jiraatan fakkaatu. Keessumattuu guddinni biyyoota Awrooppaa hedduu gaaffii nama keessatti uuma. Babal’achuun barnoota teeknikaaf ogummaa iccitii guddina biyyoota dureeyyii akka ta'e hayyoonni tokko tokko ragaa bahu.
Ministir Deetaan Barnootaa Obbo Tashoomee Lammaa akka jedhanitti, babal’achuun barnoota teeknikaaf ogummaa iccitii guddina biyyoota dureeyyii duuba jiruudha. Biyyoonni akka Chaayinaa hiyyumaa gadadoo keessaa bahanii sadarkaa ammaa irra jiran kanarra akka gahan kan taasise babal’achuu barnoota teeknikaaf ogummaati jedhu.
Itoophiyaanis sochii gama kanaan jiru cimsuuf haalduree barbaachisoo ta’an guutachuun ciminaan hojjetaa jirti kan jedhan Obbo Tashoomaan, sochiin eegalme teeknooloojiin yoo deggarame guddina hawwamu milkeessuun ni danda'ama. Damee barnootaa kana babal’isuun miira hirkattuummaafi rakkoo hojidhabdummaa dargaggoota furuun guddina dinagdee hawaasaafi biyyattii fooyyessuuf kan gargaaru ta'uu himu.
Barnoota teeknikaaf ogummaa babal’isuu qofa osoo hintaane qulqullina isaa mirkaneessuun barbaachisaa waan ta'eef teeknooloojii ammayyaan deeggaruun barbaachisaa waan ta'eef teeknooloojii biyyoota guddatanii waraabnee itti fayyadamuu qabna. Ogummaan ni baratamaa, ni dhaalama akkasumas kan duraan ture ammoo ammayyoomsuun qulqullina barnoota teeknikaafi ogummaa biyyattii fooyyessuuf hojiin raawwatamaa jiru jajjabeessaa ta'uu dubbatu.
Dameen barnootaa kun wiirtuu lafee dugdaa biyyaattii ta'uu kan himan Obbo Tashoomaan, rakkoo ilaalchaa gama kanaan jiru cabsuun fayyadamtummaa hawaasaafi biyyaa mirkaneessuudha. Dameen barnootaa kun dargaggoota hojidhabeeyyii hedduuf carraa hojii banuun gara abbaa qabeenyummaatti akka ce'an taasisaa jiraachuu himu.
Hojiin teeknikaaf ogummaan fedhiifi of kennanii hojjechuu barbaada kan jedhan Obbo Tashoomaan, dameen barnootaa kun biyyattiitti babal’achuu erga eegalee as namoota hedduu fayyadamoo kan taasise ta’uyyuu hubannoo namoonni damichaaf qaban fooyya'uu dhabuusaatiin bu’a qabeessummaan isaa sadarkaa barbaadamerra hingeenye. Kanaafuu damee ogummaa riqicha qaroominaa ta’e kanarratti xiyyeeffannaan hojjechuun bu’aan qulqullinaarratti xiyyeeffate hojiirra ooluu qaba jedhu.
Ollaa ofii ilaalanii of fooyyessuun jijjiirama kan jedhan Obbo Tashoomaan, of kennanii hojjechuu dhabuun deegaafi hirkattummaa babal’isuu waan ta’eef barnootni teeknikaaf ogummaa filannoo jalqabaa taasifachuun ammayyummaadha jedhu.
Walumaagalatti, iccitiin biyyoota guddatanii duuba jiru barnoota teeknikaaf ogummaa teeknooloojii ammayyaan deggarame babal'isuu isaaniiti. Kanaafuu Itoophiyaanis imala guddina dinagdeeshee milkeessuuf qulqullinaafi bu'aa damee barnoota teekinikaafi ogummaa irraa argamu daran fooyyessuurratti xiyyeeffattee hojjechuutu irraa eegama.
Saturday, 10 March 2018 00:18
Saturday, 10 March 2018 00:17
Dargaggoonni qe'eesaaniirraa buqqa'an Bishooftuutti simataman
Finfinnee: Lammilee Oromoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaa'an keessaa dargaggoonni 537 Bulchiinsa Magaala Bishooftuutti simatamuusaanii Waajjirri Dhimmoota Kominikeeshinii magaalichaa ibse.
Sirna simannaa kanarratti Abba Gadaa Tuulamaafi Walitti Qabaan Gumii Abbootti Gadaa Obbo Bayyanaa Sanbatoo, gara biyya abbootii gadaafi bakkee irreechaatti baga nagaan dhuftan jedhanii, isin ijoollee keenya gara mana keessanii dhuftani waan ta’ee akka abbaafi haadhatti isin bira dhabbachuun isin gargaarra jechuun ibsaniiru.
Kantiibaan Magaala Bishooftuu Aadde Gannat Abdallaa gamasaaniin akka jedhanitti, ummata Oromoo sababa Oromummaasaaniif qe’eefi qabeenya isaaniiraa buqqa’an simachuuf bulchiinsi magaalaalichaa hojii bal’aa hojjechaa tureera. Magalaa Bishooftuu bakka itti hojjetanii of jijjiiran waan taateef jabatanii akka hojjetaniif dargaggoota kanaaf dhaamaniiru.
Ajajaan Poolisii magaala Bishooftuu Komaandar Shifarraa Guutuu aadaa boonsaa, wal jaalachuu, wal kabajuufi jaalala hojii ummani Harargee qabu magaala Bishooftuutti calaqqisiisu akka qaban dargaggoota kanaaf dhaamaniiru.
Simatamtoonni tokko tokkos yaada kennaniin, Magalaa Bishooftuu dhufuun kan isaan gammachiise ta’uu himuun, hojiilee bara kana ummata Oromoo buqqa’an simachuuf mootummaan naannoo Oromiyaafi Bulchiinsi Magaala Bishooftuu godhan galateeffataniiru.
Saturday, 10 March 2018 00:15
Saturday, 10 March 2018 00:14
Torban kana/This_Week 10573
Torban darbe/This_Month 96930
Guyyaa mara/All_Days 1435353